မုန်တိုင်း: 1675.. virus အမျိုးအစား များ အကြောင်း ၁စေ့ ၁စောင်း ( 7.10.11 )
1675.. virus အမျိုးအစား များ အကြောင်း ၁စေ့ ၁စောင်း ( 7.10.11 )
၁။Computer VirusComputer virus ဆိုတာ သူ့ကိုသူ attach လုပ်ထားတဲ့ program
(သို့) fileတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာတစ်ခုကနေ တစ်ခုကိုပြန့်ှနှံ့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်..လူတွေမှာ Virus ကူးသလိုပဲ ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ System ကိုပုံမှန်အလုပ်မလုပ်အောင် နှောက်ယှက်မယ်၊ Windowsကို Error တွေများလာအောင်လုပ်မယ်၊ user data တွေကို ဖျက်ဆီးမယ်၊ Hardwareတွေ Software တွေ အရေးကြီးတဲ့ File တွေကို ဖျက်ဆီးမယ်... စတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်..ဒါပေမယ့်
Virus အများစုဟာ executable fileတွေဖြစ်ကြပါတယ်.. ဥပမာ.. chrome.exe, system.bat , flashy.comစသဖြင့်ပေါ့ .. သူတို့ဟာကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိနေရင်တောင်မှ သင်ကိုယ်တိုင်မှသွားမဖွင့်ရင်/ သွားမ run မိရင် ကွန်ပျူတာကို ဘာမှ မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး...ဒါကြောင့် မှတ်ထားရမှာက လူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်မပါဝင်ပဲ Computer Virus သည်မပျံ့နှံ့ မကူးစက်နိုင်ပါ...Virus ပျံ့နှံ့နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်...forward E-mail က attached file တွေ၊ memorystick(flash/thumb drives) တွေ၊ Full sharing ကနေ virus infected fileထည့်တာတွေ၊ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း မသိပဲနဲ့ Virus infected file ကိုshare လုပ်မိတာတွေ .. စသဖြင့်ပေါ့...ဗျာ၂။MalwareMalwareဆိုတာ
အင်္ဂလိပ်စကား ၂ လုံး Malicious Software ကိုပေါင်းစပ်ပြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေက အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့ virus လို program တွေပါပဲ.. အဲဒိMalware ကကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ ၊ မသိစေပဲ singlecomputer / server / computer network ထဲ ၀င်ပြီး ကွန်ပျူတာ Systemပျက်ဆီးစေနိုင်အောင် ၊ အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် ရေးလေ့ရှိကြပါတယ်..Malware တစ်ခုမှာ Computer VIrus , worms, trojan horses, most rootkits,spyware, dishonest adware, crimeware and other malicious and unwantedsoftware တွေပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်..၃။wormworm
ဆိုတာက virusနဲ့ဆင်တူအောင်ရေးထားကြတာပါပဲ.. virus တစ်ခုရဲ့ Sub-classလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်... သူကတော့ Virus လို လူကဖြန့်မှပျံ့တာမျိူးမဟုတ်ပဲ သူပါသူ Computer network ထဲမှာရှိတဲ့အခြားကွန်ပျူတာတွေကို လူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လုံးဝမပါပဲနဲ့ပျံ့နှံ့စေတာဖြစ်ပါတယ်...သူ့ပါသူ ဖြန့်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိတာပေါ့နော်...အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ်ကတော့ သူ က သူ့ပါသူ System file တစ်ခုလိုအယောင်ဆောင်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ သန်းပေါင်း ၁၀၀ လောက် copy ပွားနိုင်ပါတယ်၊Hard disk ရဲ့ used space ကို များလာစေတယ်..Computer ရဲ့ System memoryusage တွေ များလာစေတယ်.. network bandwidth တွေကိုတက်လာစေတယ်... Runထားတဲ့ program တွေကို not responding ခဏခဏဖြစ်လာစေတယ်.. လူသိများတဲ့ wormကတော့ Blaster worm ပါ.. ထွင်လိုက်တဲ့လူကတော့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တုန်းက အသက်၁၈နှစ် အရွယ် Jeffrey Lee Parson ဖြစ်ပြီး ထောင် ၁၈ လ ကျသွားခဲ့ပါတယ်..Blaster worm က windows စတက်တာနဲ့ Registry ကီးHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunwindows autoupdate = msblast.exe မှာ နေရာယူပါတယ် ၊ msblast.exe ဆိုတာက တော့နာမည်တူပေးထားတာပေါ့Blaster worm က Computer System ထဲမှာရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ Cracker တွေက ကွန်ပျူတာကို Remote လုပ်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ရေးထားပါတယ်..၄။Trojan
horseTrojan horse ကို Trojan လို့လည်းခေါ်ပါတယ်..Trojan ဆိုတဲ့မြင်းရုပ်ကြီးအကြောင်း ငယ်ငယ်က ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာသင်ဖူးကြမှာပေါ့.. Triဇာတ်ကားလည်း ကြည့်ဖူးကြမှာပါ... အဲဒိထဲကလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်... :P ပုံမှန်အားဖြင့် အသုံးဝင်တဲ့Software တွေမှာ ထည့်ထားတတ်ကြပါတယ်... ဥပမာပေါ့ဗျာ... Game တစ်ခုကိုInstall ပြီးဆော့နေပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်မှာ Hacker တွေ Cracker တွေကကွန်ပျူတာထဲကို ၀င်မွှေနေလို့ရအောင်လုပ်ပေးနေတယ်.. အဲဒီတော့ အဲဒိ Game ကိုTrojan horse လို့ခေါ်တာပေါ့ .. တစ်ကယ်တော့ Game က တရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ Gameပဲ.. ဒါပေမယ့် Virus infected ဖြစ်နေတဲ့ Game လို့ပြောရလိုဖြစ်နေတာပေါ့..နမူနာ Trojan Horse ကတော့ waterfalls.scr ဆိုတဲ့
free waterfall screen saver ပဲဖြစ်ပါတယ်..Trojan
horse တစ်ခုဟာ အောက်ပါအချက်များကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်...* Remote Access* Data Destruction* Downloader/dropper* Server Trojan(Proxy, FTP ,
IRC, Email, HTTP/HTTPS, etc.)* Disable security software* Denial-of-service attack (DoS)၅။Spywareသူကတော့
သူခိုးပေါ့နော်.. Spy တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာသိကြမှာပါ.. သူလဲအဲလိုပါပဲ...သူက ကွန်ပျူတာကို ထိခိုက်ဖျက်ဆီးချင်မှ ဖျက်ဆီးမယ်.. ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာမှာသုံးနေတဲ့ user ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော အချက်အလက်တွေ၊ အရေးကြီးတဲ့Data တွေကို သူ့ရဲ့ Main server တစ်ခုခုကို နေ့စဉ် သတင်းပို့ပေးနေတယ်...Spyware တွေက များသောအားဖြင့် Web browser တွေကနေ ၀င်နိုင်ပါတယ်...ပြီးရင် သူက Browser home page ကိုပြောင်းထားတတ်ပါတယ်..သင့်ကို Errormessage တွေ အမျိုးမျိုးပြမယ်..(ဥပမာ-
သင့်ကွန်ပျူတာမှာ problemsတွေများနေပြီ..အဲဒါတွေပြင်ချင်ရင် အောက်ကခလုတ်ကို နှိပ်ပါ) စသဖြင့်ဆွဲဆောင်မယ်၊ သင်က link တစ်ခုကို click လိုက်ပေမယ့် သင်မဖွင့်ပဲနဲ့ အခြားPorn Site တွေ အလိုလိုပွင့်လာမယ် စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ... တစ်ချို့ လူတွေက httpcookie တွေကို Spyware တွေလို့ ထင်ကြပါတယ်.. တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့်အဲဒိ cookie ထဲမှာ Spyware က track လုပ်နိုင်တဲ့ Data တွေပါလာတတ်တာကြောင့် Spyware Remover တော်တော်များများက Cookie တွေကို ဖျက်ပစ်ကြတာပါ.Spyware ကို ကာကွယ်ချင်ရင်တော့ pop-ups ကျလာတဲ့ link တွေကိုရှောင်တာကောင်းပါတယ်... Free
ဆိုတာကတော့Advertising-supported software (သို့) software packageတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.... သူကတော့ Screen မှာ Automatic ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးထားပြီးDownload အတင်းလုပ်ခိုင်းပါတယ်... :Dအချို့သော Adware များဟာ Spyware များဖြစ်တတ်ကြပါတယ်... ဒါကတော့ဒီလောက်ပဲ :D၇။CrimewareCrimeware
ဆိုတာကတော့ Spyware, Adware, Malwareအမျိုးအစားတွေထဲမှာပါပါတယ်.. သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ financial crimeတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးကြတာများပါတယ်..သူက user password တွေ၊ linksတွေ၊ အချက်အလက်တွေ ကို မှတ်သားထားနိုင်ပြီး သူ့ကို Run ထားတဲ့လူကပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြီး user data တွေကို ခိုးယူနိုင်တာပေါ့.... ဥပမာပြောရရင်ခုခေတ်စားနေတဲ့ key logger တို့ .. keystroke logging software
တို့ဟာ Crimeware အမျိုးအစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်..
1674.. 1 GB USB Stick ကို2GB အဆင့်တိုး နည်း
16773.. Game Booster Premium + Serial Keys (Full V...
1672.. အိုဇုန်း ထွှာ အပေါက်အား တွေ့ရှိကြောင်း အတည်ြ...
1671.. ကွန်နရှင် မကောင်းလည်း ရအောင် ချက်နည်း
1669.. Fake Mail ပေးပို့နည်း
1668.. Desktop က Icon လေးတွေကို နေရာ အစိတ် အကျဲ ခြ...
1667.. ဖိုမ သဘာဝ အသိပညာပေး ( 41 )
1666.. သရဏဂုံ အကြောင်း (2) 2.10.11
1665.. Gtalk အတွက် အဂ်လိပ် မြန်မာ အဘိဓာန် အသစ်
1664.. Excel နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုြ...